Mampiaraka ao Korea: Izay Hitranga
Izany, efa nahita ny tenanao ao Korea, na io ho an’ny sekoly na ny asa, ary hitoetra ny fotoana fohy. Efa mitady namana, ary ankehitriny, mahita izay olon-tiany, mety koa ho amin’ny rivotra. Na izany aza, satria ianao efa nandre fa ny mampiaraka ny kolontsaina ao Korea mety ho somary hafa noho izay ianao ampiasaina mba hiverina an-trano, indrindra fa raha toa ka avy amin’ny firenena any ivelan’ny Azia ianao malina, ary te-hahazo fanazavana fanampiny alohan’ny handeha fa mahafatifaty ny zazavavy avy any amin’ny fisotroana kafe na izay hunky lehilahy amin’ny fivarotam-boky satria fantatrao ry zareo avy amin’ny teny koreana ny kolontsaina. Rehefa dinihina tokoa, Korea no toa manana manokana quirks raha ny fiarahana, na dia tsy midika hoe ny antony hialana amin’ny fiarahana eto. Fa tsy izy ireo fotsiny dia mety hahatonga ny fiarahana na mahafinaritra kokoa. Toy ny tany amin’ny firenena hafa, misy fomba isan-karazany izay mety ho tonga manerana ny manaraka bae. Dia mety ho ny mpiara-mianatra na mpiara-miasa, afaka ho olona iray ianao raha nihaona avy amin’ny fisotroana] ny faran’ny herinandro, na ny olona iray nihaona tamin’ny alalan’ny teny fifanakalozana, na angamba ny fitiavana tantara dia nanomboka rehefa roa nihazakazaka ho samy hafa, ary tsy nahy raraka ny kafe rehetra eo aminareo. Izany hoe, misy ny fomba mahazatra ho an’ny Koreana ny endrika ny fifandraisana fa tahaka ny hisongona ny hafa: fivoriana ny alalan ny namana, ny manokana teny ho an’ny maha izany. Fomba izany ianao efa manana ny iray, fara fahakeliny boky, handeha ho any mampiaraka azy ireo, fa izy ireo dia mendrika ny olona, dia manatona anao amin’ny fo izany fikasana. Ny downside izany indraindray mety ho afaka tsy ho azo antoka loatra hoe hatraiza ny mety ho fifanarahana ny anareo roa efa nieritreritra avy, afa-tsy ny hoe ianao na tokan-tena. Na izany aza, raha toa ianao ka tokan-tena, ary vonona mifangaro, aza matahotra ny hangataka ny namana mba hametraka anareo. Na dia be na inona na inona, dia mbola ho mahafinaritra traikefa, ary angamba ianao, fara fahakeliny, nivoaka tamin’ny namana vaovao. Ankehitriny fa efa nihaona tamin’ny olona iray fa toa mifanohitra izy liana amin’ny, ny fotoana mandeha avy eo amin’ny daty dia avy. Efa samy mitafy ny akanjo tsara toy ny koa ny fomba amam-panao ao Korea, fara-fahakeliny ho an’ny vitsivitsy voalohany daty raha tena te hahatonga ny olona iray ary efa nomanina ny sasany mahafinaritra ny fiaraha-mientana. Fa tsara alohan’ny manomboka ny daty, na angamba nandritra izany, ianao sisa manontany tena hoe: iza no mandoa. Na dia ny fotoana no miova, ary indrindra fa ny tanora, sekoly-handeha ry namana ao amin’ny tany am-boalohany ny faha-roapolo taonany mirona ho raraka ny volavolan-dalàna, farafahakeliny tao amin’ny trano fisakafoanana, dia matetika mbola tsy voalaza fomba amam-panao fa ny olona dia tokony handoa ny daty voalohany, ary angamba amin’ny manaraka vitsivitsy manaraka. Amin’ny toe-javatra sasany, indrindra fa ny daty voalohany, ny lehilahy dia mety handoavana ny rehetra be dia be izany, raha ny hafa kosa ho izy handoavana ny fihodinana voalohany, ny tovovavy amin’ny manaraka, sy ny sisa. Rehefa mahazo ny mahafantatra ny hafa tsara kokoa sy lasa ofisialy zavatra, ny fandoavana ny tokony na ny tenany avy. Azo inoana fa ianao te-hamonjy ny mafanan’ny ho avy ny fivoriana sy ny toy ny tsy miankina, na ny olon-kafa ianao mahita ny anti-panahy ny koreana vehivavy mitaiza ny tafio-drivotra anao.
Na aiza na aiza ao Korea Atsimo, indrindra fa any Seoul, ianao dia afaka mahita ny mpivady mifampitantana, manana ny fitaovam-piadiana manerana ny tsirairay. Ny sasany aza sahisahy-hizara kely pecks, ary indraindray dia mety hahita azy ireo rehefa tsy voafehy samy hafa ny pimples, ary inona no tsy. Amin’ny fomba maro ny haavon’ny ny PDA azo ekena ao Korea Atsimo dia mety hahagaga anao, amin’ny fomba tena be dia be tsy mafanan’ny noho izay ianao dia mba jereo ny any amin’ny vahoaka any Eoropa na any Etazonia, fa niara-ny mpivady ao Korea Atsimo dia be kokoa amin’ny tavanao ary mazava momba ny fifandraisana toerana imasom-bahoaka. Any amin’ny Tandrefana, dia mety efa nandre ny andro fitsipika, fa ny anao kosa manao fahadisoana goavana ianareo raha mihevitra fa mihatra ao Korea Atsimo ihany koa. Eto izany dia mety ho raisina ho toy ny mariky ny niraharaha ianao, raha tsy efa nifandray tamin’izy ireo zo araka ny daty aoka ho fantany nanana fotoana tsara. Raha oharina amin’izay mety ho ampiasaina mba, amin’ny ankapobeny ireo Koreana tahaka ny mifandray amin’ny ny boo betsaka, betsaka kokoa matetika, mandritra ny andro rehetra, avy tsara maraina ny tsara alina. Mety tsy ho ny tena riveting resaka, nefa dia toa zava-dehibe ny mampiseho miahy anao amin’ny alalan’ny fametrahana azy ireo fotoana samihafa mandritra ny andro izay ry zareo manao, na dia efa nihinana, dia mahazo an-trano azo antoka, ary ny sisa. Eo amin’ny lafiny hafa indray, raha tsy ry zareo sms ianao fa be dia be, izany dia mety, na mba tsy ho mariky ny niraharaha mankany ianao. Izany mazava ho azy dia tsy mihevitra ny rehetra ho toy ny olona sasany dia mazava ny karazana izay tsy te-handany fotoana be dia be eo amin’ny telefaonina, na manao ahoana feno rafitry ny jadona ny anao izy ireo. Na izany aza, raha toa ka ny olona izay efa nahita tampoka ny fifandraisana dia tsy tanteraka, dia tena tsara dia mety ho ry zareo very tombontsoa nefa tsy mahalala ny fomba ny milaza izany aminareo, noho ny tahotra ny mandratra ny fihetseham-ponao. Mety tsy ho ny fomba ianao zatra ny fikirakirana ny toe-draharaha, fa izany no ara-dalàna teo amin’ny samy Koreana. Mazava ho azy, fa tsy ny fitraitraiky ny ratsy indrindra famaranana, dia mety ho ny soa mba hiresaka momba ny hanorotoro na mpiara-miasa momba ny hafa izay azo atao ho antony ao ambadiky ny tsy fisian’ny fifandraisana. Koa izany no ara-dalàna na tsy ankasitrahan’ny olona eo amin’ny samy Koreana ny indraindray fotsiny masina ny olona iray (atsaharo ny fifandraisana tsy misy fanazavana) eo amin’ny dingana voalohany dia ny fiarahana, raha ny tombontsoa mitranga fizzle.
Ny mampihavaka ny Ao Korea mampiaraka ny kolontsaina tena tsy mety misy farany
Ampahany iray ao an-toerana niaraka kolontsaina izay dia mety indrindra ny voly na indrindra fa manelingelina ireo ny zava-drehetra olon-droa miara-manao. Tsy toy ny any amin’ny Tandrefana, fa vao ny Andron’ny mpifankatia ho an’ny mpivady, dia ny Koreana no fanampiny mpivady’ fety toy ny Fotsy Andro, Dipoavatra Andro, ary na dia ny Krismasy. Ankoatra izany, ny isam-bolana dia kely ny fialan-tsasatra ho an’ny mpivady, amin’ny lohahevitra manokana ho an’ny isam-bolana. Lafiny iray hafa fa mety ho fahafinaretana ho anao ny zava-nitranga, avokoa ny mpivady ny zavatra. Avy amin’ny vava vola aminy, ny kiraro iray manontolo akanjo ho an’ny mpivady tarehiny. Miankina aminao sy ny namanao mba hanapa-kevitra ny fomba an-kolaka na bibidia te-hahazo izany. Amin’ny rehetra rehetra, manantena izahay ary manantena anao mba manana mahafinaritra raha toa ka misafidy ny daty raha monina any Korea. Maro ny zavatra lehibe afaka hiaina amin’ny alalan’ny manana mpiara-miasa eto na izany aza, ny fiainana ho mahafinaritra sy manatanteraka na dia tsy iray. Ny tsara indrindra dia ny mifampiresaka amin’ny ho avy ny namana, sy ny vaovao boo, nahoana no tsy handray anjara amin’ny ity mahafinaritra koreana Minitra Sarotra ny mahita ny tsara ianao dia afaka mamaky ny teny koreana. Inona no hitanao mahaliana na miavaka momba ny mampiaraka ao Korea? Mizara ny toro-hevitra sy traikefa miaraka amintsika ao amin’ny fanehoan-kevitra eto ambany
← Koreana Fitiavana Andian-teny ho an'ny Mampiaraka ny Fifandraisana
Koreana Mampiaraka kisendrasendra chat alternative →